शुक्रबार जन्मिएका मान्छे कस्ता हुन्छन ? – Suchana Hub
शुक्रबार जन्मिएका मान्छे कस्ता हुन्छन ?
काठमाण्डौ । हामि सबैलाई आफु जन्मेको बार अनुसार आफ्नो स्वभाव,भविष्य र वर्तमान बुझ्न जो कोहिलाई पनि मन लाग्दछ । त्यसैले मानिसहरुमा विश्वास छ कि जन्मेको महिना ,गते र बारले मासिको जीवनमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । मानिसको स्वभाव, वर्तमान र भविष्य उनीहरुको जन्मेको समय, गते, बार, तिथि, महिना लगायत कुराहरुले गर्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहदै आएको छ ।
शुक्रबार जन्मेका व्यक्तिको मन दिमाग र शरिर निकै राम्रो हुने गर्दछ, यसर्थ उनीहरुले अरु व्यक्तिलाई आँफू प्रति छिटै आकर्षित गर्न सक्दछन। शुक्रबार जन्मने व्यक्तिहरु जुन सुकै काममा पनि लगनका साथ् लाग्ने हुँदा उनीहरु हरेक करियरमा सफल हुन्छन् । शुक्रबार जन्मने व्यक्ति निकै सहनशील हुन्छन्, उनीहरु हत्तपत्त रिस देखाइ हाल्दैनन् भने अरुको कुरा निकै संयमताका साथ् सुनेर मात्र आफ्नो भाव व्यक्त गर्छन्। भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
शुक्रबार जन्मने व्यक्तिलाई रिस निकै कम उठछ तर जब रिस उठछ नजिक भएका वयक्तिको हालत खराब हुन्छ । शुक्रबार जन्मने व्यक्ति राम्राे प्रवक्ता हुने सक्च्ने क्षमता हुन्छ। शुक्रबार जन्मने व्यक्ति मुश्किलदेखी डराउदैनन, उनीहरु हरेक मुस्किलको डटेर सामना गर्दछन। शुक्रबार जन्मने व्यक्ति बुद्दिमानी हुन्छन् भने समाजमा निकै प्रतिष्ठित हुन्छन् । शुक्रबार जन्मने व्यक्ति निकै भावुक किसिमका हुन्छन । उनीहरु हरेक कुरालाई मनमा लिईहाल्छन् जसका कारण उनीहरुलाई सानो सानो कुराले पनि दुखि बनाउन सक्छ ।
Tags: #ज्योतिषशास्त्र, #ताजा समाचार
Previous आज कृष्ण जन्म अस्टमि:कृष्ण भगवानको दर्शन गर्दै आजको राशिफल पढ्नुहोस [यी राशीलाइ ठुलो लाभ]
Next यसरी रिझाउनुहोस् धनकी देवी लक्ष्मीलाई, हुन्छ धनको वर्षा